03/02/2018 - Page 3 sur 4 -
Mahajanga : Mpangalatra nodarohin’ny olona
Nitrangana savorovoro indray tany amin’ny faritr’i Mahajanga, fantatra tamin’izany fa lehilahy iray no niharan’ny hatezeram-bahoaka rehefa avy nangalatra ny entana teratany frantsay niala sasatra tany an-toerana. Saika maty nodarohin’ny andian’olona tao amin’ny fokontany Mangarivotra ny …Tohiny
Lasibatry ny asan-jiolahy ireo sekoly : Mitsoa-ponenana ireo mpianatra any Soavinandriana Itasy
Miaina ao anatin’ny horohoro. Voatery mifindra monina ireo olona any ambanivohitra distrikan’i Soavinandriana Itasy. Ankoatra ny fambolena, ny fiompiana sy ny fananana lafo vidy ao an-tokantrano, dia lasibatry ny asan-dahalo ihany koa ireo sekoly ao …Tohiny
Kidnapping : Lasan’ny jiolahy i Akyl Cassam Chenai
Mbola tsy votsotra eny am-pelatanan’ireo jiolahy akory ny tompon’ny “bijouterie” kalidas, dia efa nisy karana lasibatry ny fakana an-keriny indray tany Toamasina, omaly tokony ho tamin’ny 07 ora sy fahefany hariva. Karana mizaka ny zom-pirenena …Tohiny
VAOVAO TAPATAPANY : Sprinter nivadika tao Analavory
Zaza iray maty tsy tra-drano Iray kilaometatra tsy hiditra an’Analavory no nisehoan’ny lozam-piarakodia, omaly tokony ho tamin’ny 4 ora maraina. Fiara fitateram-bahoaka Sprinter avy any Tsiroanomandidy ity tra-doza ity. Raha ny fanazavana, dia tsy nahatana …Tohiny